Inokwenzeka: Iqonga lokuThengisa uLwazi lokuThengisa uKhenketho | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 13, 2019 NgoLwesihlanu, Septemba 13, 2019 Douglas Karr
Inakoyiswa liqonga lentengiso lokukhula elenza ukuba iimveliso zenze, zenze kwaye zenze ukuba kwenziwe amaphulo emijelo yokuwela. Iimpawu eziphambili, ezinje ngeZillow, iSeatGeek, kunye neBhokisi, khetha i-Iterable yokunika amandla ukuzibandakanya kwabathengi kulo lonke ixesha lokuphila kunye neengcebiso zomxholo kunye nokuguquguquka kwedatha okungalinganiyo.
Ukuzibandakanya kwabaThengi abaNqamlezileyo
Amava omthengi akumgangatho wehlabathi aqala ngezinto ezintlanu eziphambili zokuphumelela kwintengiso: ukuchongwa kwabaphulaphuli, ukudityaniswa kwedatha eguqukayo, ukwenziwa komkhankaso wobomi, ukuzenzela okusekwe kwindlela yokuziphatha kunye nokwenza ngcono ukusebenza.
Qonda zonke izinto ezizodwa zabathengi kunye nezinto abazikhethayo ngokugcina amakhulu ezinto kunye nedatha yomsitho wedatha yomntu ngamnye kwiprofayile yomsebenzisi. Isahlulo esinamandla sababhalisi bakho bephulo elijolise kakhulu, emva koko wenze abaphulaphuli abajongeka njengokujonga kunye nokubuyisela abasebenzisi kwakhona kwimidiya yoluntu.
Ukudityaniswa kweDatha eDityanisiweyo
Sebenzisa yonke idatha yababhalisi bakho, indlela yokuziphatha kunye nedatha yomnyhadala-ngaphakathi nangaphandle kwabantu besithathu-ngexesha lokwenyani lokudala umyalezo owenzelwe wena kunye namaphulo.
Imodeli yedatha eguqukayo ye-Iterable, ii-API zale mihla kunye newebhu zewebhu zifumana ulwazi kuwo nawuphi na umthombo kwinqanaba elingenamda.
Ukuqulunqwa koMkhankaso woBomi boBomi
Yila imikhankaso yokuthengisa ephucukileyo, kunye nokwenza umyalezo ofanelekileyo kuyo yonke i-imeyile, ukutyhala ngefowuni, i-SMS, i-in-app, i-web push, i-imeyile ngqo, ukuphinda ujonge ekuhlaleni kunye nokunye.
Iterable yokutsala kunye nokulahla ukuSebenza kwe Studio ikuvumela ukuba wongeze amacebo okucoca ulwelo, ucwangcise ukulibaziseka, wenze izinto ezibangela ukuba wenze imiyalezo isebenze kwiqonga elinye
Ukuziphatha okusekwe kwindlela yokuziphatha esekwe kubuntu
Lungiselela incoko yokunxibelelana nomthengi ngamnye ngokwenza imiyalezo ekujolise kuyo ekhethekileyo eyahlukileyo kubo, ngalo mzuzu, naphina apho bakhoyo.
Yakha umxholo owenzelwe wena, onamandla kunye nomakhi weetemplate osebenziseka lula we-Iterable, i-handlebars ye-handlebars ehamba phambili, ukondla idatha, kunye neziqwengana ezimiselweyo.
Ikhathalogu eChongiweyo yokuQinisekiswa koMxholo
Ikhathalogu yinjineli yemetadata eqhutywa ngokobuqu. Nge-Iterable Catalog, abathengisi bayakwazi ukwenza amava omyalezo abhalwe buqu avela kwidatha yomthengi yeqela lokuqala-yonke into isuka kwiinkcukacha zeprofayili yobuqu ukuya kukhetho lokuziphatha olungenamkhethe. Ikhathalogu isebenze ububanzi beedatha eziqulathwe kwisitokhwe sentengiso, isenza ukuba abathengisi benze ngokulula amava okuthengisa anamandla asebenzayo kwizinga ledatha labathengi ngokubanzi.
Ngaphambi kokusebenzisa ikhathalogu, usetyenziso lwethu lwalunqunyelwe ekunikezeleni ngohlobo oluqhelekileyo phezulu 5 Uluhlu lweendawo zeenkampu kwilizwe ngalinye njengezindululo. Besingenakho amandla okucebisa ngamandla indawo yeenkampu kubasebenzisi ngokusekwe kwiiprofayili zabo. Emva kokuphunyezwa kweKhathalogu, isicwangciso sethu sonke sokuthengisa sitshintshile ekudlaleni umlingisi womdlalo wekampu kunye nabasebenzisi bethu-ukuvala isikhewu phakathi kwenkampu kunye nebala. Sikwazile ukwahlulahlula ngendlela esingazange sabona ngayo ngaphambili. Asigcinanga ngokwazi ukukhulisa amandla ethu okuncoma indawo yeenkampu, kodwa sikwabonelela ngeendawo ezenzelwe umntu ngamnye kumsebenzisi ngamnye.
Anthony Easton, iNtloko yoPhuhliso lwaBaphulaphuli e Umlawuli
Ukuqonda okungachazwanga kuyilelwe ukukunceda ukuba ube nomfanekiso-ngqondweni wemikhankaso yakho, ukulandelela ukusebenza kwakho, kunye nokukhawuleza ngokukhawuleza. Khetha kwiindidi ezahlukeneyo zetshathi, nikezela uluhlu olusebenzayo lweemikhankaso kunye nokwandisa impumelelo yakho yomkhankaso ngeengxelo zesiko kunye needashboard.
Uvavanyo luphucula iimetwork zephulo ngokubonisa uvavanyo olunamandla lwe-A / B kunye novavanyo lwe-multivariate olukhetha umxholo ophumeleleyo ukukhulisa ukuvula, ukucofa kunye nokuguqula.
Ishedyuli yeDemo eDlulayo
tags: ijelo elinqamlezileyo